Hanomboka tsy ho ela ny Fihaonana An-tampony amin’ny Global Voices (2010)! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Novambra 2018 7:44 GMT
Taorian'ny volana vitsivitsy nikarakarana ary ny horohorontany iray tena nanelingelina be, latsaky ny 10 ora mialohan'ny fanombohana ny Fihaonana An-tampon'ny Global Voices Citizen Media 2010 izao isika. Ho anareo efa aty Santiago miaraka aminay, ho faly ny hahita anareo izahay rahampitso ao amin'ny Tranombokim-bahoaka ao Santiago. Ho an'ireo handray anjara an-tambajotra, maro ny fomba hijanonana amin'izany mandritra ireo roa andron'ny fihaonana.
Handefa mivantana an-dahatsary izay farany vitanay amin'ireo resaka ho atao izahay, raha mbola ho eo anilanay foana ireo andriamanitry ny aterineto. Ankoatra ilay fandefasana mivantana an-dahatsary, hitoraka blaogy mivantana ireo resaka, fanamarihana mahira-tsaina, ary fosafosa tsy azo ialana rehetra amin'ny teny Angllisy sy Espaniola i Jorge Gobbi sy i Felipe Cordero, mandritra ireo roa andro isehoan'ilay fihaonana an-tampony.
Afaka mihaino tsy tapaka ao amin'ny Twitter ianao, ary afaka mandray anjara amin'ny fampiasana ny tenifototra “#gv2010“. (Manana torolalana ho an'ny fampiasana tenifototra i Twitter.) Na dia tsy manana fidirana amin'ny aterineto aza, mitatitra ao amin'ny Twitter ireo mpandray anjara amin'ny fihaonana an-tampony saingy nosakanan-dry zareo ny wi-fi tao amin'ilay hotely. Misy vondrona Flickr ihany koa ho an'ny sary tamin'ilay fihaonana.
Henoy tsy tapaka ny Blaogy Fihaonana An-Tampony mba hahazoana vaovao mandritra izany roa andro izany. Efa navoaka ny isanà fandinihana mahazendana mikasika ny fampandrosoana ny fandraisana anjara an-tambajotra any Oganda, Maraoka, Ejipta, Madagasikara, Masedonia, Arzantina, Inde, Gaza, Shina, Kolombia, ary any Bolivia.
Manantena ny fandraisanao anjara izahay, aty Shilia sy manerana ny tany!